Maitiro ekunyaradza Siri (ndoda) zvizere | IPhone nhau
Pablo Aparicio | | Siri, Zvidzidzo uye zvinyorwa
Kubva zvaakasvika ne iPhone 4S, Siri akatanga kutaura uye pakanga pasina wekumuvhara kana isu tanga tine mhinduro dzemanzwi dzakaitwa. Kusvikira iOS 9Kana isu taida kuimisa, taifanirwa kuremedza mhinduro yezwi, asi ikozvino pane nzira yekudzora izvi tisingafaniri kudzokera kumasethingi kana tango gadzirisa. Kuitora iri nyore kwazvo, asi ndechimwe chezvinhu izvo isu zvatisingazive zviripo nekuti hatina kumbofunga nezvazvo. Tinokudzidzisa iwe sei mbeveve Siri zvakazara mushure mekusvetuka.
Isu tinovhura iyo Zvirongwa uye tichaenda General.
Ngatiendei kuchikamu Siri.
Takatamba pa Mhinduro Yezwi.
Tinosarudza Chengetedza nebhatani rebhatani.
Sezvauri kuona mune yekupedzisira skrini, «Iwe ucharamba uchinzwa mabhipi uye mhinduro dzemanzwi kubva kuna Siri paunenge uchishandisa 'Hei Siri' kana kana chishandiso chakabatana nechigadzirwa cheBluetooth, mahedhifoni kana CarPlay»Kunyangwe isu tiine toni bhatani pane mbeveve. Kana isu tikasarudza iyo Hands-free sarudzo, isu tinongonzwa chete kurira uye izwi patinoshandisa "Hei, Siri" kana patinenge takabatana kune yeBluetooth chishandiso, mahedhifoni kana CarPlay.
Mune maonero angu, neiyi gadziriso tichave nechokwadi chekuti Siri haatishamise nekutaura zvinonzwika patisingatarisiri, asi isu ticharamba tichifanira kutaura kukumbira zvinhu. Ini ndinosuwa sarudzo senge iya ine Cortana paWindows Phone matinogona ita zvikumbiro zvedu nekuzvinyora nekhibhodi uye pasina kutaura. Ini ndinofunga zvingave zvinonakidza kuwedzera bhatani paSiri skrini iyo yatinogona kutora iyo keyboard uye kutanga kunyora maodha edu, handifunge kuti zvakaoma uye zvinogona kubatsira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Siri » Maitiro ekunyarara zvachose Siri (ndoda)
Chinhu chinoitika kwandiri naSiri mune ios 9 ndechekuti pandinodzvanya bonton kuti ndiibvunze, ini handinzwe beep inoratidza kuti Siri ari kunditeerera, ini ndinongoona mafungu ane mavara pachiratidziri. Ini ndinongonzwa beep iyo kana ini iine iPhone yakabatana kune yemagetsi network uye ini ndinoshandisa «Hei Siri. Izvi zvakajairika here paios 9?
Mhoro Mario. Icho ichokwadi muIOS 9, asi zvinonzwika kana uine mahedhifoni.
Zvakanaka, zvinonzwika kwandiri pane yangu iPhone 6 ine / isina magetsi gridhi ...